Ukwenziwa kwe-Ultrasonic kwamaNiosomes - Hielscher Ultrasound Technology
AmaNiosomes ama-vesicles asesilinganisweni, angasetshenziswa njengezithwali zezidakamizwa (isb. Izidakamizwa zomdlavuza) nezinye izinto ze-bioactive. I-Ultrasonic emulsation yindlela elula futhi esheshayo yokwenza ama-niosomes amancane ngomthwalo ophakeme wezidakamizwa.
I-niosome iyi-vesicle engasekeli ku-ionic, eyakheka kakhulu ukungafakwa kwe-non-ionic surfactant kanye nokufakwa kwe-cholesterol njengomthandi. AmaNiosomes azinzile ngokulwa nokuchithwa kwamakhemikhali noma i-oxidation futhi anesikhathi eside sokubeka ngokuqhathaniswa ne-liposomes. Ngenxa yokusebenzisa izinto ezisetshenziselwa ukuzilungiselela kwe-niosome, zitholakala kalula, zi-biocompatible, futhi zingama-immunogenic. AmaNiosomes asebenza ngokuzinzile, azinza amakhemikhali futhi anikeza isikhathi eside sokuziqhathanisa ngokuqhathaniswa ne-liposomes. Ngokuya ngosayizi kanye nama-lamellarity, izindlela ezahlukahlukene zokulungiselela ziyatholakala njenge-sonication, ukubuyela emuva kwesigaba, ukuhanjiswa kwefilimu ethambile noma inqubo yokuthatha izidakamizwa ye-trans-membrane pH gradient. Ukulungiselela kwe-niosome ye-Ultrasonic kuyindlela ekhethiwe yokukhiqiza ama-vesilles angenamikhawulo, amancane futhi afanayo ngosayizi.
Ultrasonic Niosome Ukwenziwa
Ukwakha ama-niosomes, i-emulsion ye-oyili-emanzini (o / w) kumele ilungiswe kusuka kusixazululo se-organisidi se-survivant, i-cholesterol, kanye nesisombululo samanzi esiqukethe i-biioactive compact, ie umuthi. I-Ultrasonic emulsation iyindlela ephezulu yokuxuba uketshezi olungafakwanga njengamafutha namanzi. Ngokugawula amaconsi azo zombili izigaba ze-Ans ezephula zibe usayizi we-nano-, kutholakala i-nano-emulsion. Kamuva, i-solvent organic iyahanjiswa, kuholele ekutheni ama-niosomes alayishwe ngama-Therapeutic agents, ahlakazeke esigabeni samanzi.Lapho kuqhathaniswa nokushukumisa imishini, indlela yokubumba ye-naosome ephakeme ngokwedlulele ngokwakha niosomes enobukhulu obukhulu obuphakathi nendawo kanye ne-polydisperity index ephansi inqubo esheshayo. Ukusetshenziswa kwama-vesicles amancane kuvame ukuthandwa, uma kucatshangelwa ukuthi zivame ukugwema izindlela zokucacisa umzimba kangcono kunezinhlayiya ezinkulu, futhi zihlala isikhathi eside egazini. (cf. Bragagni et al. 2014)
Izinzuzo ze-Ultrasonic Niosome Ukulungiselela
unilamellar, ama-vesicles amancane, afanayo
inqubo elula futhi esheshayo
I-Ultrasonic Niosome Preparation Protocol
I-N-Palmitoyl glucosamine niosomes (Glu) egcwele i-doxorubicin, umuthi olwa nomdlavuza, yalungiswa ngokuxhawula ingxube yeNPG (16 mg), Span 60 (65 mg), cholesterol (58 mg), noSolulan C24 (54 mg ) kwisixazululo se-doxorubicin (1.5 mg / ml, 2 ml, kulungiselelwe ku-PBS) ku-90 ° C nge-1 h, kulandelwa yi-probe sonication yemizuzu eyi-10 (75% yama-max).
Ama-vesicles we-Palmitoyl glycol chitosan (GCP) alungiswa njengoba kuchaziwe ngaphambili (11) ngu-probe sonication glycol chitosan (10 mg) ne-cholesterol (4 mg) ngesixazululo se-doxorubicin (1.5 mg / ml). (UDufes et al. 2004)
UP400St – Idivaysi ye-400W ultrasonic ye-nano-emulsions
Izindlela Ezenye Zokulungiselela zeNiosome
Izindlela zokwakheka ezihlukile ze-niosome ezifana ne-reverse phase evaporation inqubo noma inqubo ye-trans-membrane pH gradient drug drug ethola inqubo ibandakanya ukusetshenziswa kwamandla ka-ultrasonic. Womabili la makhono asetshenziswa ikakhulukazi ukwakha ama-multilamellar vesicles (MLVs). Ngezansi ungathola incazelo emfushane yawo womabili amasu kanye nesinyathelo se-sonication esihilelekile.
Sonication in Niosome Ukulungiselela nge Reverse Phase Evaporation
Endleleni ye-Reverse Phase Evaporation (REV), izingxenye zokwakheka kwe-niosomal ziyahlakazwa kungxube ye-ether ne-chloroform futhi yengezwe esigabeni samanzi, esiqukethe umuthi. I-Ultrasonic emulsation isetshenziselwa ukuguqula ingxube ibe yi-emulsion enosayizi abahle. Kamuva, isigaba se-organic siyahanjiswa. Ama-niosome atholakala ngesikhathi sokuhwamuka kwe-solvent ye-organic ayizi-vesilles ezinobukhulu obukhulu.
Inqubo yokuthatha izidakamizwa ye-trans-membrane pH gradient drug
Ngenqubo ye-trans-membrane pH gradient (ngaphakathi kwe-acidic) inqubo yokuthatha izidakamizwa (ngokulayisha okukude), i-survivant ne-cholesterol iyancibilika ku-chloroform. I-solvent iyakhutshwa ngaphansi kovalo ukuthola ifilimu elincanyana odongeni lweflask-round. Ifilimu i-hydrate ene-300 mM citric acid (pH 4.0) ngokukhipha ukumiswa kwawo. Ama-vesilles ama-multilamellar aqandisiwe futhi ancibilikisiwe kathathu bese emva kwalokho abhekelwa indodana esebenzisa i-probe-hlobo ultrasonicator. Kulokhu kumiswa kwe-niosomal, kufakwa isixazululo samanzi esiqukethe i-10 mg / ml yezidakamizwa futhi silinganiswe. I-pH yesampula ibuye inyuselwe ku-pH 7.0-7.2 nge-1M disodium phosphate. Ngemuva kwalokho, le ngxube isishiswa ibe ngu-60 ° C imizuzu eyi-10. Le nqubo ithela kuma-multilamellar vesicles. (cf. Kazi et al. 2010)
Ukuncishiswa kobukhulu be-Ultrasonic kweNiosomes
Ama-Niosomes ajwayele ukubalwa usayizi we-10nm kuya ku-1000nm.Ukusekela indlela yokulungiselela, ama-niosomes avame ukuba ngosayizi omkhulu futhi athambekele ekwakheni ama-aggregates. Noma kunjalo, osayizi abathile be-niosome bayinto ebalulekile uma kukhulunywa ngohlobo oluhlosiwe lohlelo lokulethwa. Isibonelo, usayizi omncane kakhulu we-niosome kuhlu lwe-nanometer ulungele ukulethwa kahle kwezidakamizwa, lapho umuthi kufanele uhanjiswe ngaphesheya kolwelwesi ukuze kufinyelele endaweni okuqondiswe kuyo amaselula, ngenkathi kunconywa ama-niosomes amakhulu wokulethwa kwezidakamizwa zombuso noma we-intra-cavity noma izinhlelo zokusebenza ze-ophthalmic. Ukuncishiswa kosayizi be-ultrasonic kwama-niosomes kuyisinyathelo esivamile ngesikhathi sokulungiswa kwe-niosomes enamandla amakhulu. Amandla e-Shear we-Ultrasonic enza i-deagglomerate futhi ahlakaze i-niosomes ibe yi-nano-niosomes ehlakazekile.
I-Protocol – Ukuncishiswa kobukhulu be-Ultrasonic kweLipoNiosomes
UNaderinezhad et al. (2017) i-LipoNiosomes eyakhiwe nge-biocompatible (inhlanganisela ye-niosome ne-liposome) equkethe phakathi kuka-60: cholesterol: DPPC (ku-55: 30: 15: 3) nge-3% DSPE-mPEG. Ukwehlisa usayizi weLipoNiosomes olungiselelwe, ngemuva kokufuduswa kwe-hydrate bakwazile ukumiswa kwamaminithi angama-45 (imizuzwana eyi-15 ku-10 nemizuzwana eyi-10, amplitude 70% kuma-watts ayi-100) ukuze banciphise ukuhlanganiswa kwezinhlayiya besebenzisa i-ultrason homogenizer UP200St (Hielscher Ultrasonics GmbH, Germany). Kwindlela ye-pH-gradient, amafilimu omisiwe we-CUR, ama-survivants kanye ne-lipids afakwa amanzi ngo-1300 mL we-ammonium sulfate (pH 1⁄4 4) ku-63 C ngemizuzu engama-47. Ngemuva kwalokho, ama-nanoparticles afakwa indodana yokugeza ngeqhwa ukukhiqiza ama-vesicles amancane.
I-Ultrasonicators yokulungiselela iNiosome
I-Hielscher Ultrasonic inolwazi lwesikhathi eside kumklamo, ukukhiqiza, ukusabalalisa kanye nensizakalo ye-homogenisers ephezulu esebenza kahle yomkhakha wezemithi, wokudla, nowokuhlobisa izimonyo.
Ukulungiswa kwama-niosomes asezingeni eliphakeme, ama-liposomes, ama-lipid nanoparticles aqinile, ama-polymeric nanoparticles, ama-cyclodextrin complexes kanye nezinye izinkambi zezidakamizwa nano-ezihlelekile kuyizinqubo, lapho izinhlelo ze-Hielscher ultrasonic zidlula ngenxa yokwethenjwa kwazo okuphezulu, ukuphuma kwamandla okungaguquki, kanye nokushayisana okuqondile. Ama-ultrasonicators we-Hielscher avumela ukulawula okuqondile kuwo wonke amapharamitha wenqubo, njenge-amplitude, izinga lokushisa, ingcindezi namandla we-sonication. Isoftware ehlakaniphile ithela ngokuzenzakalelayo yonke imingcele ye-sonication (isikhathi, usuku, amplitude, amandla net, amandla aphelele, izinga lokushisa, ingcindezi) ekhadini le-SD-khadi elakhelwe ngaphakathi.
INiosomes vs Liposomes
I-Liposomes ne-niosomes ama-vesicles angama-microscopic, angalayishwa ngamakhompiyutha e-bioactive ukulethwa kwezidakamizwa. Ama-Niosomes afana nama-liposomes, kepha ahlukile ekwakhekeni kwawo ngama-bilayer. Ngenkathi i-liposomes ine-phospholipid bilayer, i-niosome bilayer yenziwa kusuka kuma-surionants ama-nonionic, okuholela umehluko wamakhemikhali kumayunithi wesakhiwo. Lo mehluko wokuhleleka unikeza ama-niosomes ukuqina kwamakhemikhali, ikhono eliphakeme lokungena kwesikhumba, nokungcola okungatheni.
AmaNiosomes ahlukaniswe ngosayizi abe ngamaqembu amathathu amakhulu: Ama-vesicles amancane we-unilamellar (SUV) anobubanzi obulinganiselwa ku-10-100 nm, ama-vesicles amakhulu we-unilamellar (LUV) anobukhulu obujwayelekile obuyi-100-3000nm, nama-multilamellar vesicles (MLV) aboniswa ngu ngaphezulu kwamabhayidi angaphezu kweyodwa.
“AbakwaNiosomes baziphatha nge-vivo efana ne-liposomes, bandisa ukusakazwa kwezidakamizwa ezivalelekile futhi kuguqulwa ukusatshalaliswa komzimba nokuqina komzimba. Njengama-liposomes, izakhiwo ze-niosomes zincike ekwakhiweni kwe-bilayer kanye nangendlela yokukhiqiza yazo. Kubikwa ukuthi ukuhlangana kwe-cholesterol kumakhasimende kuyanciphisa umthamo wokungena ngesikhathi sokwakhiwa, futhi ngaleyo ndlela ukufaka kahle ukusebenza. ” (Umsebenzi et al. 2010)
AmaNiosomes angalungiswa ngamasu ahlukahlukene njengendlela yokufafaza yefilimu emincane, i-ultrasonication, indlela yokuguquguquka kwesigaba, indlela yeqhwa, ithanga, microfluidization, noma indlela yokuqeda ukomisa. Ngokukhetha uhlobo olufanele lokulungiselela, olweqile, okuqukethwe i-cholesterol, izengezo zengezwe, kanye nokumiswa kokumiswa, ukwakheka, ukuqina, ukuqina, kanye necala lokukhishwa kwama-niosomes kungenziwa ukuze kufezekiswe izidingo ezithile zokuthwala izidakamizwa.
Ukuze ukhiqize ama-niosomes ahambisana kakhulu ne-cytotoxicity ephansi kakhulu, ama-survivants asetshenziswa kulungiselelo lwe-niosome kufanele abe biodegradable, biocompatible futhi non-immunogenic.